Iindaba-Amandla ekhontrakthi, i-XCMG yokujikeleza iqela lomatshini wokumisa umi emazantsi!
Le projekthi ilunge ngokwenene kwimpilo yabantu. Inani leeprojekthi zesiseko semfumba ngama-3,600, kunye neepali zobubanzi zii-600mm, 800mm, kunye ne-900mm. Ubunzulu bemfumba obuphakathi yi-25m, kwaye umthamo wolwakhiwo mkhulu. Nangona kunjalo, iifomati zomhlaba zekarst zihlala zengozi ezifana nemingxunya ewile, imingxunya, imingxunya ye-oblique, izando zokuwisa, njl.
Ukuvela kulimo olunzulu XCMG kwimarike Guangxi, XCMG rotary yokomba rigs kakuhle kakuhle amaqela zokwakha zasekuhlaleni. Ngeli xesha, i-XCMG XR360E kunye ne-XR400E yokumba izixhobo ezijikelezayo zokuchonga zonyulwe njengee "yadi zabucala ", kwaye ngaphezulu kweshumi elinambini lazo liya kungena kwisiza ngokwamaqela ngexesha elinye. Ukuzinza kwesiseko semfumba kunye nezixhobo eziyimfihlo zokuqinisekisa umgangatho wenqwaba.
Umatshini wagquma kunye namandla alo ehashe. I-XR360E iyeyona nto iphambili yokumba izixhobo zeprojekthi, inika umdlalo opheleleyo kwizibonelelo zetorque enkulu kunye namandla amakhulu, kwaye isebenzisana netyhubhu elandelayo yokukhusela (ubunzima betyhubhu yokukhusela ziitoni ezingama-21) kulwakhiwo olujikelezayo . Uzinzo lweemfumba ezinzulu kunye neemeko ezintsonkothileyo zokusebenza zisombulula uthotho lweengxaki ezinje ngemingxunya ewile kunye nemingxunya yeprojekthi!
Ukongeza kumandla ezixhobo, ukusebenza ngokukuko kobugcisa bokujikeleza bokujikeleza kwempahla nayo iyimfuneko ekuxhaseni konke-konke kwendlela yokwakha. I-XCMG ibambisene nabasebenzi beenkonzo zomthengisi ukuqhuba ukulandelelana okubalulekileyo. Iqela lobungcali lobungcibi limiswe bucala kunye nabathengi ukubonelela uluhlu olupheleleyo lweenkonzo ukusuka kulungiso lwezixhobo, ulondolozo, izincedisi, kunye nenkxaso yezobuchwephesha ukuqinisekisa ukuba nganye yokugrumba yokujikeleza igcwele umsebenzi kunye nezixhobo ezipheleleyo. , umthwalo opheleleyo!
UMeyi noJuni “lixesha leemvula” eGuilin. Abasebenzi bokwakha basebenza emvuleni. Abasebenzi benkonzo yeXCMG kunye nabaphathi beeprojekthi basemsebenzini kunye, banyanzelisa ukuhlala kwindawo yokwakha iiyure ezingama-24, kunye nokusebenzisana neqela lesiseko semfumba yokuphumelela iintsuku ezisi-7. Umsebenzi wokulandela ngokupheleleyo iimfumba ezijikeleziweyo zombhobho wokukhusela kunye neenzame ezi-100 zokukhawulezisa inkqubela phambili yeprojekthi.
Ukomelela kweendawo eziqeshiweyo kuvela ekuqwalaselweni kwabathengi nakwiimarike. Kwaye oku kunakanwa kwenziwa ngokuqhubekekayo kwiprojekthi nganye yi-XCMG ngomgangatho wayo ophezulu wemveliso, ukusebenza ngokuzinzileyo kolawulo kunye nokusebenza okuphezulu kokwakha. "I-XCMG XCMG, ikuncede uphumelele", ibisoloko sisiqinisekiso esomeleleyo sokusebenza!
Ixesha Post: Aug-17-2021
imfumba yokomba isixhobo, Umatshini weDth Rig, Umatshini wokugrumba amaqula, Umatshini wokugoba amanzi amancinci,